प्रचण्ड नेपाललाई ओली सरकारले पक्राउ गर्ने, प्रहरीले दियो यस्तो चेतावनी – Paluwa Khabar
माघ २१, २०७७ बुधबार 22
नेपाल प्रहरीले आमहड्तालका नाममा गैरकानुनी क्रियाकलाप गर्नेलाई कारबाहीको दायरमा ल्याउने बताएको छ ।
सरकारले संवैधानिक निकायमा गरेको नियुक्तिको विरोधमा नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूहले बिहीबार आमहड्तालको घोषणा गरेको छ ।
आमहड्तालका क्रममा अस्पताल, एम्बुलेन्स, पानी, दूध, औषधिलगायतका अत्यावश्यक सेवा, विद्यार्थीहरुको परीक्षा सञ्चालनमा अवरोध नगर्ने नेकपाले जनाएको छ ।
तर, सवारी–साधन सञ्चालनमा अवरोध गर्दा विद्यार्थीहरु परीक्षा केन्द्रसम्म पुग्न समस्या हुने देखिन्छ ।
प्रचण्ड–नेपाल समूहले आमहड्तालको घोषणा गरे पनि गैरकानुनी क्रियाकलाप गरे नियन्त्रणमा लिएर कारबाही गर्ने प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी वसन्तबहादुर कुवँरले बताए ।
उनले भने, सुरक्षा व्यवस्था कडा पार्छौँ । पसल बन्द गराउँदै हिँड्ने र अन्य गैरकानुनी कार्यमा लागेकाहरुलाई नियन्त्रणमा लिएर कारबाही गर्ने काम हामी गर्छौँ । कसैलाई जबर्जस्ती गरे पनि हामी कारबाही गर्छौँ ।
आम हड्तालको घोषणा
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रचण्ड–माधव पक्षले बिहीबार आम हड्ताल लगायत आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बुधबार आकस्मिक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी संवैधानिक नियुक्तिहरू खारेज गर्न माग गर्दै बुधबार साँझ देशभर मसाल जुलुस, बिहीबार बन्द लगायत आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो ।
पत्रकार सम्मेलनमा स्थायी कमिटी सदस्य पम्फा भुसालले संविधानको रक्षाका लागि भोलि आमहड्तालको घोषणा गरिएको जानकारी दिइन् ।
उनले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको सुनुवाइ नगरी असंवैधानिक रूपमा सपथ गराइनु निरंकुशता र जबरजस्तीको पराकाष्ठा भएको बताइन्।
पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकारको फासीवादविरुद्ध सशक्त आन्दोलन गर्न आवश्यक रहेकाले बाध्यतावश आमहड्ताल घोषणा गर्नुपरेको बताए।
आमहड्तालले विद्यार्थीहरुको परीक्षा र सर्वसाधारण मारमा पर्ने भए‍न र रु भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा श्रेष्ठले परीक्षार्थीले प्रवेश पत्र देखाए सवारीसाधन नरोकिने पनि प्रष्ट पारे ।
उनले देशव्यापी आव्हान गरिने आमहड्तालमा अत्यावश्‍यक सेवामा पनि कुनै रोक नलगाउने बताए ।
राष्ट्रपति कार्यालयमा बुधबार आयोजित एक विशेष समारोहमा संवैधानिक अंगका प्रमुखहरुलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले सपथ खुवाएका थिए।
त्यस्तै सदस्यहरुलाई सम्बन्धित आयोगका प्रमुखहरूले शपथ खुवाएका थिए। विभिन्न संवैधानिक निकायमा सिफारिस भएका ३२ जना पदाधिकारीहरूले शपथ ग्रहण गरेका छन्।
संसदीय सुनुवाई हुन नसकेपछि नियमावली अनुसार ४५ दिन पुगेकाले उनीहरुको नियुक्ति गरिएको हो।
रामकुमारी झाँकीलाई पनि प्रक्राउ गर्न माग
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी केपी शर्मा ओली पक्षको अखिल नेपाल महिला संघले नेकपा प्रचण्ड–माधव पक्षकी नेतृ तथा विघटित प्रतिनिधि सभा सदस्य रामकुमारी झाँक्रीलाई प्रक्राउ गरी कारबाही गर्न माग गरेको छ ।
के भन्छन्ः प्रचण्ड–नेपाल ?
बुधबार दिउँसो पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै केन्द्रीय संघर्ष समितिकी संयोजक पम्फा भुसालले अहिले बाध्यतात्मक परिस्थित आएकोले आकस्मिक नयाँ कार्यक्रमको घोषणा गरेको बताइन् ।
संवैधानिक निकायको नियुक्ति असंवैधानिक रूपमा बलमिच्याँईबाट सपथ गराइनु निरंकुशता र जबरजस्तीको पराकाष्ठा हो,’ उनले भनिन्’, संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा र फासिस्ट, जंगलराज, गुण्डाराजको अन्त्य गर्न जरूरी छ।
संवैधानिक आयोगको सपथ खारेजीको माग गर्छौं। भोलि शान्तिपूर्ण देशव्यापी आमहडतालको आह्वान गरेका छौं ।
नेतृ भुसालका अनुसार भोली अस्पताल , प्रेस, पानी दूध एम्बुलेन्स र परीक्षाबहेक सबै कुरा बन्द गरिने छ । पार्टीले केपी ओलीको प्रतिगमन विरुद्ध जुनसुकै कदम चाल्ने सक्ने उनले बताइन् ।
यस्तै सरकारले माओवादीका पूर्वलडाकु तथा बहिर्गमित सेनालाई खरिद बिक्री गरेर संघीयता सिद्ध्याउन लागिपरेको दाबी गरेका छन् ।
दाहालले बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालको राष्ट्रिय सम्मेलनमा सम्बोधन गर्दै सरकार पूर्वलडाकु तथा बहिर्गमित सेनालाई खरिद बिक्री गरेर संघीयता र जनयुद्ध सिद्ध्याउन लागिपरेको दाबी गरेका हुन् ।
दाहालले सरकार पक्षबाट बहिर्गमित सेना तथा पूर्वलडाकुको स्तरअनुसार मूल्य तोकिएको बताए ।
उनले भने, ‘तपाईं कुन स्तरको कमान्डर हो रु तपाईं कति मानिस लिएर आउन सक्नुहुन्छ ? त्यसअनुसारको कोटा हुन्छ ।
चार हजार नै उठाएर लानुभयो भने एक–दुई करोड । त्यस्तो पो छ त अहिले छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मायाले सशस्त्र युद्धका घाइते, बहिर्गमित सेना र पूर्वलडाकुसँग भेटघाट नगरेको दाहालको दाबी छ ।
उनले सरकारको नक्कली मायाजालमा नपर्नसमेत आग्रह गरेका छन् ।
उनले भने, ‘तपाईंहरुले ठान्नुभाको छ, माया गरेर हामीलाई सहयोग गर्न खोज्दै छन् ।
उनीहरुले हामीलाई भेडाबाख्रा जसरी बिक्री गरेर सिद्ध्याउने हो ।
तपाईंलाई १० लाख, २० लाख तिरेर किन खरिद गर्ने रु तपाईंलाई अलि मोटो बनाएर काट्ने र मासु खान लाने हो । माया गरेर सम्मान गर्न लाने हो ।
उनले बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाको हितमा काम गरिरहेको बताए । चाहँदा चाहँदै पनि बहिर्गमित जनमुक्ति सेनालाई सहयोग गर्न नसकेकामा उनले दुखेसो गरे ।
उनले भने, ‘हामीले सम्मान नगर्ने रु हामीले माया नगर्ने रु उनीहरुले गर्छन् त रु त्यो होइन ।
हिजो पनि हाम्रो मूल्य तोकेका थिए, अहिले पनि तोकिरहेकै छन् ।
उनले भने, ‘नेपालको राजनीतिमा निरंकुशतावादीले सम्पूर्ण सत्ता लिन खोजेको बेलामा जनयुद्धलाई शान्तिमा रुपान्तरण गर्ने र राजतन्त्रलाई गणतन्त्रमा रुपान्तरण गर्ने बेला यही हो भन्ने ठानेँ मैले ।
यसबेला गरिएन भने त्यसपछि फेरि समय आउँदैन, हाम्रो नियती पेरुकै हुन्छ। हाम्रो नियती श्रीलंकाकै हुन्छ भन्ने देखेँ मैले।
राजनीतिक आन्दोलन भनेको राष्ट्रिय मात्रै नहुने भन्दै उनले विश्व परिस्थिति हेर्नुपर्ने उनले बताए । उनले भने, ‘राजनीतिक आन्दोलन भनेको राष्ट्रिय मात्रै हुँदैन।
यसको अन्तर्राष्टिय आयाम पनि हुन्छ। विश्व परिस्थिति कस्तो छ भन्नेमा पनि भर पर्छ।’
विश्वमा भएका ठूलाठूला सशस्त्र विद्रोहको नाम निशान आफ्नै आँखा अगाडि मेटिएको आफूले देखेको उनले बताए।
उनले भने, ‘हामीले जनयुद्ध सुरु गर्दा भारतमा, श्रीलंकामा ठूल्ठूला युद्ध थिए। श्रीलंकाको तमिलहरुको सशस्त्र विद्रोह संसारभर ख्याति प्राप्त विद्रोहको रुपमा थियो।
ल्याटिन अमेरिकामा पेरुमा, कोलम्बियामा ठूल्ठूला युद्ध थिए।
हामीले लड्दै गर्दा हाम्रै आँखा अगाडि तमिलहरुको त्यत्रो विद्रोह नराम्रोसँग दवियो। त्यसको प्रमुख नेतादेखि हजारौँ हजार मानिसहरु मारेर ध्वस्त पारियो।
सबै परिस्थिति हेरेर ‘जनयुद्ध’लाई विजयतर्फ लैजान यस्तो निर्णय गरेको उनको भनाइ छ।
‘मैले तपाईंहरुलाई विजयतिर लैजान, तपाईंहरुको बलिदान खेर नजाने बाटो के हुनसक्छ भन्नेतर्फ मैले अलिकति बढी सोचेँ ।
Prevओहो के हुन्छ अब? मन्त्रालयले भर्खरै जारी गर्यो यस्तो सुचना सम्पुर्ण बिद्यार्थीले पढ्नै पर्ने
Nextगोंगबुमा यसरी ट्या’क्सीमा आ’गो लगाए ; प्रत्यक्ष भिडियो हेर्नुस
चाडपर्वमा प्रसासनकाे कडाई, घरमै बसेर मनाउन अनुराेध